Iray amin'ireo sarisma be mpitady indrindra eran'izao tontolo izao noho ny tanjaky ny anabolika avoakany dia, tsy isalasalana, ny Ligandrol - R2 Labs, satria vokatra miavaka amin'io heviny manokana io.
Ny olona mitady fitomboan'ny habetsaky ny hozatra ao anatin'ny fotoana fohy, ary koa mitady tombony amin'ny tanjaka sy fiaretana dia afaka mahita ity sarm lehibe ity ho vahaolana haingana sy mahomby.
Ligandrol dia ao anatin'ity andiana sarma vaovao ity izay mahazo mpampiasa haingana, satria vokatra afaka mampitombo ny hery anabolika amin'ny vatana izy io nefa tsy miteraka voka-dratsy ateraky ny vatana, indrindra raha ampitahaina amin'ny steroid anabolika.
Inona ny Ligandrol - R2 Labs?
Ity vokatra ity dia sarm, izany hoe, singa iray izay novolavolaina manokana hanatsarana ny fivoaran'ny faritra iray amin'ny vatana nefa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny faritra hafa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy toy ny steroid anabolika izay mihetsika amin'ny vatana iray manontolo, Ligandrol - R2 Labs dia vokatra iray izay tsy mampifandray afa-tsy amin'ny masin'ny hozatra sy ny mpandray ny taolana, izay manafaka ny mpampiasa amin'ny andianà fiatraikany mahazatra amin'ny tsingerina steroid.
Ny nomenclature singa mavitrika an'ny Ligandrol - R2 Labs dia LGD-4033, fantatra ihany koa ho sarm anabolika indrindra amin'ireo safidy rehetra misy eny an-tsena, satria izy io dia vokatra iray mikendry manokana ny tombony be amin'ny hozatra sy ny fahombiazan'ny hozatra.
Amin'ny ankapobeny, ity dia iray amin'ireo vokatra tsara indrindra hita eny an-tsena ho an'ireo izay mitady fanovana estetika haingana fa tsy manimba ny fahasalaman'ny vatana amin'ny fampiasana steroid anabolika.
Ho fanampin'izany, sarmma izay manana ny antsasaky ny ainy ao amin'ny vatana ao anatin'ny vanim-potoana iray izay mety miovaova hatramin'ny 24 ka hatramin'ny 36 ora, noho izany dia miha mahomby kokoa noho ny hafa ary manana tombony amin'ny fitantanana lava kokoa noho ny fanafody hafa am-bava .
Fa inona ny Ligandrol?
Ny fampiasana an'ity sarm ity dia mifandraika indrindra amin'ny tanjon'ny tombam-bidy betsaka amin'ny hozatra ary mitazona ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana.
Ity dia vokatra iray izay mikendry ny hampiroborobo ny "tombony madio" amin'ny fomba tsotra sy tsy manimba ny vatana noho ny safidy hafa toy ny steroid anabolika.
Amin'ity tranga manokana ity, ny Ligandrol - R2 Labs dia manana hery anabolika avo ary be mpampiasa amin'ny tsingerina mikendry ny fananganana hozatra haingana sy mahomby miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanatsarana ny estetika sy fampitomboana ny fahombiazana.
Ho fanampin'izany, ny Ligandrol koa dia manome fitomboan'ny tanjaka ary izany dia mahatonga ny fampihetseham-batana azo tanterahina amin'ny enta-mavesatra avo kokoa, noho izany ny valin'ny fiakaran'ny fampisehoana sy ny tombam-bidy hozatra dia miha haingana kokoa.
Ny hetsika iray hafa amin'ity vokatra ity dia ny fanatsarana ny syntetika proteinina, izay mifandraika amin'ny fizotran'ny fanarenana ny hozatra, noho izany, ny fotoana antonony hampiofanana hozatra iray matanjaka indrindra dia fohy kokoa mandritra ny tsingerin'ity sarm ity.
Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny Ligandrol - R2 Labs dia ampiasaina mandritra ny vanim-potoana be loatra satria sarm anabolika izaitsizy tokoa, na izany aza, ny fampiasana azy mandritra ny fanapahana dia mitombina ihany koa, satria izy io dia vokatra izay afaka mampihena ny katabolisme hozatra ihany koa.
Amin'ny dingana fanapahana dia mety hahomby amin'ny fitazonana ny hozatry ny hozatra ambony indrindra na dia amin'ny sakafo tsy ampy kaloria aza.
Tombony Ligandrol - R2 Labs
Satria ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ity sarm ity dia ny mety anabolika azy, azo saika azo atao mandritra ny tsingerin'ny fampiasana azy ny vokatra tsara rehetra mifandraika amin'ny hozatra.
Ankoatr'izay, satria sarm, dia ilaina ny manantitrantitra ny poizina ambany amin'ny vatana sy ny tsy fisian'ny voka-dratsy ho an'ny faritra hafa amin'ny vatana ankoatry ny masin'ny hozatra sy ny taolana.
Raha mbola ampiasaina tsara ny Ligandrol amin'ny tsingerina voaomana tsara ho an'ny fametahana sy ny fanapahana, ny sasany amin'ireo tombony lehibe indrindra dia ireto manaraka ireto:
Fampitomboana tanjaka tanteraka;
Fitomboan'ny hozatra haingana;
Fanavaozana ny hozatra haingana;
Fampisehoana tsara indrindra;
Mitombo ny hakitroky ny taolana;
Mihena amin'ny ankapobeny ny havizanana.
Ahoana ny fampiasana Ligandrol?
Mba hitrandrahana ny tombo-tsoa amin'ity sarm ity amin'ny fomba tsara indrindra dia ilaina ny mampifanaraka tanteraka ny tanjon'ny tsingerina amin'ny tanjona farany, na ny fametahana azy na ny fanapahana azy.
Satria sarm misy hery anabolika avo lenta io dia mety misy ny fanindriana kely ny axis hormonal, amin'ity tranga ity dia nanoro hevitra ny TPC (fitsaboana aorian'ny tsingerina) ho planina mialoha, mandritra sy aorian'ny tsingerin'ny Ligandrol - R2 Labs.
Manoro hevitra ny mpanamboatra ny kapsily 1 ka hatramin'ny 2 an'ny vokatra alaina isan'andro, momba ny antsasaky ny fiainana, izay amin'ity tranga ity dia 24 ora.
Ho fanampin'izany, na dia ambany ho an'ny vatana aza ny poizina ao aminy, dia nanoro hevitra ny mpanamboatra ny tohanan'ireo mpiaro ny atiny mandritra sy aorian'ny faran'ny fampiasana azy.
Aza mihoatra ny isan'ireo kapsula natolotry ny mpanamboatra, satria ny doka lehibe kokoa dia toa tsy mahomby amin'ny resaka tombony ary mampitombo ny hamafin'ireo voka-dratsy mandritra ny tsingerina.
Ligandrol Side effects - R2 Labs
Ny sasany amin'ireo voka-dratsy ateraky ny fiatraikany matetika mandritra ny fihodinan'ny Ligandrol dia:
Fanakanana ampahany amin'ny axis hormonal.
Mba hisorohana ny voka-dratsy arak'izay azo atao dia ilaina ny manao fiarovana CPT sy ny atiny mandritra ny tsingerina.
Aiza no hividianana Ligandrol amin'ny vidiny tsara indrindra?
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa azonao atao ny mividy Ligandrol - R2 Labs amin'ny vidiny mety indrindra amin'ny alàlan'ny fivarotana azo antoka izay efa niasa nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fanampin-tsakafo sy ireo vokatra nafarana amin'ny ankapobeny.
Ny fanaovana risika amin'ny fividianana vokatra tsy sandoka dia fandaniam-bola sy fotoana fotsiny, koa mankanesa any amin'ny tranokala Best Supplement Store ary zahao ny tolotra mahavariana nataon'i Ligandrol.
Sarm-pahefana mahery vaika io ary mety ho lakilen'ny fanaovana ny fiovan'ny hatsarana amin'ny vatanao amin'ny fomba mahagaga sy haingana be.
Midira amin'ny tranokalan'ny fivarotana Supplement tsara indrindra izao amin'ny alàlan'ny CLICKING HERE, ary manome antoka ny Ligandrol - R2 Labs anao.
Aza mandany fotoana, tsapao amin'ny hoditrao ny tombony mahavariana rehetra azon'ity sarm ity atolotra anao ary ho hitanao manokana ny fomba mety hampiasan'ity vokatra ity amin'ny tanjonao.
Tags:lgd 4033ligandrolligandrol aloha sy aorianaligandrol ny fomba fandraisanaligandrol vokanyligandrol inona izanysarms ligandrol